Madaxweynaha Puntland oo dhagax dhigay waddo laami ah oo isku xiri doonta Garoowe iyo Taleex - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo dhagax dhigay waddo laami ah oo isku xiri doonta Garoowe iyo Taleex
December 19, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah dhagax dhigay waddo laami ah oo isku xiri doonta Garoowe iyo Taleex.
Wadada oo dherergoodu tahay 90km ayaa waxaa dhaqaalaha ku bixi doona bixin doonta dowladda Puntland, sida uu sheegay madaxweynuhu.
“Waddada Garoowe iyo Taleex waxay ku dhismi doontaa isku tashiga dawladda Puntland iyo shacabkeeda iyo sidoo kale ciddii kale oo aanu la kaashan karnoba, laakiin waxaan rajaynayaa in sanadka bilawgiisa ay billaabato si deg degana u bilaabato Insha Alla,” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Maamulka madaxweyne Cabdiweli ayaa mudnaanta siiya horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland si kor loogu qaado dhaqaalaha gobolka.
August 16, 2017 Dowladda Puntland oo la safatay xulufada uu Sucuudiga hoggaaminayo oo kasoo horjeeda Qatar
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kala diray golihii deegaanka ee degmada Badhan, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday madaxtooyada maanta oo Isniin ah. Madaxweynaha ayaa kala diray golaha deegaanka kadib markii lagu [...]